Ụbọchị My Pet » Akpa Atụmatụ N'ihi The ihere, Awkward Onye
emelitere ikpeazụ: Ka. 24 2020 | 4 min agụ
AFỌ nwere ike ịbụ na-akpata nchekasị maka onye ọ bụla ma karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-aga na a ụbọchị na ihe ịtụnanya onye ị ga-n'anya n'ezie iji mara ma ị na-eme ihere na ihere. Ọ bụ mgbe ihe nke a na-eleghara anya. Onye ọ bụla dị nnọọ putara na ị kwesịrị ị na-enwe ike inwe obi ike ma ọ bụ "nwoke ahụ" ma ọ bụ "nwaanyị elu" ma dị ka onye na-eme ihere na ihere m pụrụ ịgba akaebe na na-agaghị abụ na mfe.
Ọ nwere ọtụtụ ọghọm dị ka adịghị ike na-esi mara onye, ọbụna ihe na ihu karịa onye ọzọ ga-abụ na a ụbọchị na ikekwe efunahụ a njikọ na ị pụrụ mere ma ọ bụrụ na i nwere ka ezigbo gị. N'ezie, e nwere uru na ya n'ihi na ọ bụrụ na mmadụ n'ezie mmasị ị ahụ ha ga-eme ka mgbalị ahụ ma na mgbe ahụ ị ga na ha n'ezie na-amasị gị. Mgbe niile anyị na-ebi incredibly ngwa-ngwa paced ụwa na na ijeụkwụ adịghị nanị erukwa ọrụ anyị ndụ. Ọ na-nkpoda n'ime ndụ anyị kwa ma ọ bụrụ na mmadụ bụ n'ezie mmasị ị na ha ga-enweghị ihe ogologo oge ọ na-ewe iji woo ị.
M na-aga na-ekwu okwu a mpempe banyere ihe anyị nwere ike ime iji meziwanye otú anyị gafeta na a ụbọchị ma m n'okpuru setịpụrụ, na achọghị m itinye onye ọ bụla ọzọ n'okpuru ọ bụla ma, na nke a na-a ngwa ngwa usoro na kwesịrị ka a na-arụ ọrụ na ga-enweghị ike izu okè n'otu ntabi anya.
Ejiji Iji Gwa Ị
Nke a bụ a n'ọnụ nke ga-abụ ihe amamihe dị na onye ọ bụla ma ọ bụ nwaanyị na-aga na a ụbọchị na na oh-na-na-ekpo ọkụ nwoke! Ma, ọ bụ mkpa ọbụna karị mgbe ị na-a na-eme ihere, ihere onye. Mgbe niile anyị na-ekwupụta ndị anyị bụ site na ihe anyị na-eyi, ma ọ bụ eccentric ma ọ bụ karịa demure na ọ bụrụ na ị na ọgụ na mgba na-ekwurịta okwu onye ị bụ site na okwu ahụ otú i si eji ejiji pụrụ inye aka na-etinye gafee ka mmadụ ihe ị na-enweghị ike ikwu okwu. Dị ka ihe atụ ma ọ bụrụ na ị na-eji ejiji nọ nnọọ na eccentric n'ụzọ ọ pụrụ igosipụta enweghị na-ekwu ihe ọ bụla na ị bụ a lady gaga ofufe ma ọ bụ na ị na-ezi n'amaghi na fun. -Echeta mgbe nile na-eji ejiji n'ụzọ ị na-ahụ onwe gị na ọ bụghị otú ị na-eche ya zuru okè nwaanyị ma ọ bụ onye ga-eji ejiji. Ọ dị mfe ịdaba n'ọnyà ahụ. M nwere onwe m. Ezie na ụlọ ọrụ nke ndị na-m fancied m uwe otú m chere na ha ga-amasị m ka m na-eji ejiji n'ihi na m ga-achọ ka ha na-amasị m ma ihe ize ndụ nke ahụ bụ na ọbụna ma ọ bụrụ na ha na-eme dị ka gị na ha na-enweghị mmasị n'ebe gị maka gị na karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-achọ na o kwere omume Ekliziastis ọ ga amamihe ha ka ha na-ahụ ihe na-amasị gị na-eyi n'ihi na mgbe nile na nke ahụ bụ ụdị nke ịke ị ga-yi na ha n'ihi na gị na ndụ mmekọrịta.
Were ọ bụla ikpe Dị ka Ọ na-abịa
A akụkụ bụ isi nke a na-eme ihere na ihere na-overthinking na ị na-anụ a otutu na ị dị nnọọ mkpa iji kwụsị overthinking ọnọdụ. Ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ mfe mgbe ndị mmadụ ga-naanị mee ya. Overthinking bụ ihe nke na-aghọ agbakwunyere na a onye ma ọ pụrụ imeri. Ọ dị nnọọ bụghị dị mfe dị ka ya niile edere ozugbo. Gị mkpa iji o ji nwayọọ nwayọọ na usoro nke a ụbọchị ọ bụla were ikpe dị ka ọ na-abịa. Gbalịa ka ị ghara iche echiche banyere ụbọchị ukwuu tupu. Emejupụta uche gị na ihe ndị ọzọ dị ka concerts, ọgụgụ, TV egosi, fim, oge n'aga. Ihe bụ isi bụ dị nnọọ ka uche gị dị ukwuu anya na ụbọchị nke mere na ihe dị ukwuu nke àgwà gị na-abịa si na ụbọchị n'ihi na unu nwere oge na-eche echiche site na ihe nile nwere ike ime na otú i ga-aza ajụjụ na ya ma na ihe unu ga- ịjụ.
Chee echiche otú ga-adị gị banyere nke a na Afọ Iri
Eche echiche banyere otú ị ga-eche banyere ihe na-afọ iri bụ nnọọ ezi ụzọ nke na-eleru mkpa nke a ọnọdụ. Gbalịa na-eche ma ọ bụ ihe dị mkpa na nnukwu dị ka ị na-eme ya si na-. Asị na ị na-eme ka a ndudue, gịnị mezie? Ọ ga-a isi nchegbu gị a afọ iri mgbe eleghị anya ị ga-zutere nwoke nke gị na nrọ? Ọ bụrụ na mmadụ apụghị ileghara anya ole na ole emehie mgbe ahụ, ị ​​chọrọ n'ezie ịbụ na ha? E wezụga na ha na-aga na-ụjọ kwa ma na-yikarịrị ga-eme ka a ole na ole emehie onwe ha otú ọ bụ banyere-anọ na ha na-enwe olileanya na ha ga-eleghara gị. Ị gaghị achọ ka ya na onye na-mgbe niile na-akọwa gị na ihe ndị ị na-eme ihe ọjọọ. Olee ụdị ndụ ahụ ga-abụ mgbe nile?
Nke a na-agaghị eme eme n'otu ntabi anya. Ị pụrụ ọbụna nwere ụfọdụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọdachi ebe ị nọdụ ala n'ebe ma na-ekwu ihe dị nnọọ nta. Ma, ọ bụ ihe niile banyere ọganihu. Na-etinye aka dị ka ọtụtụ-elekọta mmadụ ihe dị ka ị pụrụ na oge na-aga gị obi ike na-ekwu okwu ga-mma. Ma mgbe ị na-eme nri mmadụ ga-adị n'ebe ahụ na-ege ntị ma ọ bụrụ na ọ na-ama-abịa tinyere na ala ahụ mebiri mgbidi ndị na mgbe ọ bụ na ndụ gị ndị a niile na-echegbu otú ị-abịa gafee na otú ọ na-ewere ogologo ịchọta onye n'ihi na ị ike ime ka na njikọ na otú ndị ọzọ yiri ka mfe ime ga-enweghị ihe. M na-achọ unu nile ji ezi obi na ndị kasị mma nke chi.